MDC leader Morgan Tsvangirai is reportedly battling for life in a South African hospital after his condition deteriorated rapidly yesterday. – newzimbabwevision
MDC leader Morgan Tsvangirai is reportedly battling for life in a South African hospital after his condition deteriorated rapidly yesterday.
Posted on February 6, 2018 February 6, 2018 by newzimbabwevision
MDC leader Morgan Tsvangirai, 65, is suffering from colon cancer, and is reportedly fighting for his life in a South African hospital with supporters told “brace for the worst”, based on the sources medical report that he obtained yesterday indicating that the situation is not looking good,” as his condition deteriorated rapidly yesterday according to sources.
The report says Tsvangirai is suffering from exhaustion, weight loss ,muscle thinning, lost his appetite and faced difficulty in eating or swallowing liquids as of yesterday and was in difficulty, breathing slowly, and at times had with very long pauses between breaths.More to follow. By Sibusiso Ngwenya
Posted in Corruption, Crime, Forum, MDC-T, Politics, Zanu PF	Tagged News
PRESIDENT Emmerson Mnangagwa fires 17 top CIOs who allegedly facilitated the meeting between deposed former President Robert Mugabe and opposition National People’s Party leader Joice Mujuru in Harare last week.
ZIMBABWE REPUBLIC POLICE has deployed a 152 member police security team to provide President Emmerson Mnangagwa’s presidential security tomorrow at Siyalima Farm in Guruve South as he tours a 50 hectare irrigation scheme, orchard and fishery at the venue.